Crouch “Mar baan hadda ka hor si fool ka fool ah ula kulmay Ronaldo de Lima, nasiib darro imaba uusan garanayn ruuxaan ahay!” – Gool FM
Crouch “Mar baan hadda ka hor si fool ka fool ah ula kulmay Ronaldo de Lima, nasiib darro imaba uusan garanayn ruuxaan ahay!”
(London), 25 Dis 2016 –Laacibka kooxda Stoke City ee Ingiriiska Peter Crouch oo wareysi siiyay Wargeyska ‘Telegraph’ ayaa sheegay in hadda ka hor mar uu si lama filaan ah jasiiradda Ibiza ee Spain uu kula kulmay xidiggii uu jeclaa ee uu ku dayan jiray ee Ronaldo de Lima.
“Mar aan fasax u joogay jasiiradda Ibiza ayaan si lama filaan ah ula kulmay Ronaldo oo aan ku arkay Naadi habeenkii lagu caweeyo” ayuu yiri Crouch.
“Waxa uu ahaa ruuxa keliya ee aan u tegi lahaa si aan u weydiisto inaan sawir la galo, waana sameeyay oo waan u tagay, innagoo sawirkii wada galayna ayaan is iri toloow horta Ronaldo ma ku garanayaa, laakiin ima uusan garanayn ruuxaan ahay!” ayuu sii raaciyay Weeraryahan Crouch.
Crouch oo ciyaarihiisa oo dhan ku qaatay Horyaalka Ingiriiska oo uu saftay in ka badan 400 kulan ciyaareed, isla markaana 3 sano u soo dheelay Liverpool ayay xoogaa filan waa ku noqotay in Ronaldo garan kari waayo.
Laacibkii hore ee Reer Brazil Ronaldo ayaan isagu weligii ka ciyaarin Horyaalka Ingiriiska, inkastoo uu ka soo dheelay Horyaallada Holland, Talyaaniga, Spain iyo Brazil, waxaana xidiggani uu mid ay ku du daysadaan u ahaa inta badan jiilka haatan ciyaara kubadda cagta.
Ronaldo oo haatan 40 jir ah ayaa kooxdii ugu dambeysay ee uu u ciyaaray ay ahayd Naadiga Corinthians ee Brazil ayuu u dhaliyay 18 gool 30 kulan oo uu u saftay.
Zlatan Ibra wuxuu doonayaa in xujadaan loo furo!!